मारिन Marko - सर्बियन् मूल को छ जो एक जर्मन फुटबल खेलाडी हो। क्षणमा उहाँले भनिन्छ टर्की क्लब को रंग बचाव "Trabzonspor।" एक लोकप्रिय फुटबल खेलाडी लन्डन क्लब "चेल्सी" आबद्ध गर्न हुनत सही।
मारिन Marko Bosanska Gradiska भनिने सहरमा, 1989 मा जन्म भएको थियो मार्च 13,। यो क्रोएशिया र बोस्निया को सिमानामा अवस्थित छ। को यूगोस्लाव युद्ध सुरु गरे पछि, केटा, परिवार जर्मनी सारियो। त्यतिबेला उहाँले वर्ष मात्र दुई पुरानो थियो।
उहाँले सात वर्षको लागि पेशेवर फुटबल खेल्दै थाले। अधिक सटीक, फुटबल एकेडेमी मा "Eintracht फ्रैंकफर्ट" टोली हुन। चाँडै, केटा monhengladbahskoy "बोरशिया" बाट स्काउट्स देख्यौं। यो टोली लागि उहाँले 2005 देखि प्ले। जवान आशा सम्म बस्ने, त्यसैले एक वर्ष पछि क्लब उसलाई तीन वर्ष को लागि एक पेशेवर सम्झौता हस्ताक्षर गरे। र तिनीहरूले छोटो समय केटा मा युवा राष्ट्रिय टोलीमा कारण थाले। यो वर्ष मा, त्यो सबैभन्दा प्रतिभाशाली जर्मन खेलाडी को एक को स्थिति प्राप्त गरेको छ थियो। 2007 मा आफ्नो बूंदेस्लिगा debut, तर सिजन मा टीम र्याङ्किङ्ग मा रहन असफल भयो, र त्यो कुलीन विभाजन बाँकी।
को 2007/08 सिजन मा मारिन Marko धेरै सभ्य स्तरमा नै देखाए। उहाँले 13 सहायता गरे र चार गोल। अचम्मको कुरा छैन, त्यसपछि कान्छो खेलाडी क्लब नेताहरू एक भएको छ। धेरै हदसम्म यो "बोरशिया" आफ्नो काम धन्यवाद फिर्ता बूंदेस्लिगा गर्न बन्द गरेको छ।
2009 मा, मारिन Marko एफसी "ब्रेमेन" को लागि प्ले थियो। यो 8.2 मिलियन यूरो लागि किनेको थियो। एक वर्ष पछि, एक फुटबल खेलाडी भन्दा बढी 14 लाख खर्च गर्न थाले। उहाँले, Mesut Ozil र हारून हंट जस्तै यस्तो खेलाडीहरू साथ क्लब को मुख्य हडताली शक्ति भयो। 2010/11 मा, समुद्री नै यसको सबै महिमा मा, 15 सहायता र चार लक्ष्य मा बल पठाउने बनाउन देखाए। तथापि, Ozil त्यसपछि मैड्रिड "रियल" गए, र मार्को को सफलता बिग्रन थाल्यो। "ब्रेमेन" को लागि सबै जर्मनी मा च्याम्पियनशिप मा, 87 मिलान उहाँले खेले र 8 गोल।
2012 मा, सर्बियाली मूलका यो प्रतिभाशाली जर्मन फुटबल खेलाडी लन्डन "चेल्सी" को प्रतिनिधिहरु द्वारा किनेको थियो। आफ्नो सम्झौता 2017 सम्म निष्कर्षमा थियो। मार्को पहिलो आधा अन्त्यमा एक गोल गरेका थिए नै खेल मा - को debut स्थान 18 जुलाई 2012 लिए। तथापि, उहाँले पहिलो टोली लागि प्ले भएन। त्यहाँ प्राप्त गर्न सकेनौं। एक लन्डन टोली मारिन लागि सबै छ मिलान प्ले।
त्यसपछि उहाँले स्पेनको "सविल" भाडामा लियो। Marko मारिन - राम्रो फुटबल खेलाडी, अगाडी-देख, तर यो टोली बाहिर क्षेत्र मा धेरै शायद। उहाँले Forefront गर्न राख्नु भएको थियो। उहाँले मात्र 30 खेल (र अभिभावक) प्ले र युरोप लिग को रूपरेखा दुई लक्ष्य संग डिजाइन। त्यसपछि, 2014 मा, यो इटालियन "Fiorentina" चार्टर। र विगतमा - मा 2015, 25 अगस्ट, उहाँले मलाई आफ्नो निमन्त्रणा "Trabzonspor।" यो टर्की टोली टर्की च्याम्पियनशिप मा कार्य गर्दछ। यो टोली लागि पहिलो गोल मार्को 26 सेप्टेम्बर मा थियो, र उहाँले विरोधीहरूले 'Osmanlıspor "बाट लक्ष्य मा बल पठाए।
मार्को यो टोलीमा पूर्ण खेल धेरै बिताए। उदाहरणका लागि, खेल मा 90 मिनेट, "Gaziantepspor" - "। Trabzonspor" तर, यदि उहाँले लक्ष्य स्कोर थिएन। खेल "Gaziantepspor" बाहेक - "Trabzonspor", उहाँले अझै पनि "Besiktas", "Akhisar", "Mersin", "Osmanlıspor" र अन्य क्लब विरुद्ध खेलमा 90 मिनेट खेलेका।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, राष्ट्रिय टोली लागि मार्को पनि प्ले। उहाँले 11 पटक र एक लक्ष्य स्कोरिङ क्षेत्र मा गए। र 2008 मा भयो जो युरोपियन च्याम्पियनसिपलाई, अघि, टाउको कोच Yoahim lov को विस्तारित दस्ते मा खेलाडी समावेश गरेको छ। तर, मुख्य फुटबल र देखा गरेको छैन। र, मारिन 2010 को विश्व च्याम्पियनशिप लागि टीम को संरचना को भाग भयो। तर क्षेत्र मा बस दुई पटक जारी भएको थियो। टाउको कोच मार्को निकै कमजोर डाटा (रणनीति र प्रविधी को मामला मा) छ कि लाग्यो। र त्यसपछि मेरिना अब टोलीमा आकर्षित छ।
त्यसैले, तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ रूपमा, मार्को - फुटबल खेलाडी होनहार र उज्ज्वल। सँगै एफसी "बोरशिया मनशेनग्लैडबाख" उहाँले दोस्रो बूंदेस्लिगा मा च्याम्पियनशिप जित्यो। र "ब्रेमेन" मा जा रहेको छ, उहाँले जर्मनी मा सुपर कप मा आफ्नो टोलीसँग जित्यो। त्यो 2009 मा भएको थियो। उहाँले "चेल्सी" को लागि प्ले गर्दा, यो भयो पनि युरोप लिग विजेता 2013 मा यूईएफए को। एउटै उपलब्धि उहाँले "ओस्लो" (2014-एम) को लागि प्रदर्शन को दिन मा भएको थियो।
र टोलीसँग उहाँले जूनियर बीचमा युरोप को च्याम्पियन 21 वर्ष सम्म भयो। 2010 मा उनले विश्व कप मा "कांस्य" जित्यो।
सामान्य मा, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, मार्को एक सभ्य खेलाडी गरे। यसलाई उच्च गति, उत्कृष्ट Dribbling र सही पार गरेर विशेषता छ। साथै, उहाँले क्षेत्र को एक महान दृष्टि छ। यो सबै यो अक्सर लिओनेल मेसीले र तुलना गरिएको छ भन्ने हो पियरे Littbarski। ठीक छ, हामी मात्र खेलाडी को सफलता पालन र आफ्नो हातले नयाँ उपलब्धिहरू र संग्रामहरू जीतेको लागि प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
Ruud van Nistelrooy: एउटा सानो डच गाउँ को "मानिस-लक्ष्य"
खराब दिन कसरी बच्न? पाँच व्यावहारिक सल्लाह
लघु Doberman - यो के हो?
Fugue - संगीत सिद्धान्त के?
Sergey Lisakov: तस्बिर संग जीवनी
Andzhela Lensberi: जीवनी र फोटो